 Ka mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ nwere onyinye ibu amụma kwuo okwu nꞌotu nꞌotu, mgbe mmadụ nile nọrọ nwayọọ na-ege ha ntị. Ọ bụrụ na onye ọzọ anata ozi site nꞌaka Chineke, mgbe onye ọzọ na-ekwu okwu, ka onye ahụ natara ozi ahụ chere tutuu onye nke na-ekwu ekwuchaa tupuu o kwuo nke ya. Nꞌụzọ dị otu a, ndị nile nwere onyinye ibu amụma nwere ike izisa ozi ọma Chineke. Nꞌụzọ dị otu a kwa, a ga-enyere mmadụ nile aka kasiekwa ha obi. Chetanụ na onye ahụ Chineke chọrọ isite nꞌọnụ ya kwuo okwu nwere ike iji ndidi chere ruo mgbe o ruru oge nke ya ikwu okwu. Nꞌihi na Chineke abụghị onye na-achọ ka ihe nile na-aga aghara aghara. Chineke chọrọ ka ihe nile na-aga nꞌusoro nꞌime chọọchị nile nke ndị ya.
Ekwelanụ ka onye ọ bụla jiri okwu amamihe nke ụwa mebie ọṅụ unu, na okwukwe unu, okwu amamihe ahụ nke ọsịsa ya nile dabeere nꞌechiche na ntụpụta mmadụ, kama ịdabere nꞌihe Kraịst kwuru.
Nri dị ike dị ka ụtara dịrị ndị Kraịst katara ahụ. Anyị chọrọ dimkpa nꞌokwu Chineke. Ha pụrụ ịmata ihe dị iche nꞌetiti ezi ihe na ajọ ihe.
 Ma nꞌabalị ahụ ndị kwere ekwe mere ngwangwa zipụ Pọl na Sailas ka ha gaa obodo Beria. Ma mgbe ha ruru nꞌebe ahụ, ha banyere nꞌụlọ nzukọ ndị Juu, na-ekwusa ozi ọma Chineke. Ma ndị bi na Beria jiri obi ghere oghe nabata okwu Chineke karịa ndị bi na Tesalonaịka. Mgbe ha gere ntị nꞌokwu Chineke, ha jiri ọṅụ nyochaa akwụkwọ nsọ ịchọpụta ma ozizi Pọl na Sailas na-ezi ọ bụ eziokwu. Ha mere nke a ụbọchị nile.
 Ọ bụkwa nꞌihi nke a ka m ji na-ekpesi ekpere ike, ka ịhụnanya unu na-ahụrịta onwe unu na-aba ụba. Ka unu nwee ike ito eto, ruo nꞌinwe mmazu na nghọta nke eziokwu ahụ. Ka unu si otu a bụrụ ndị na-enwe nghọta banyere ihe dị iche nꞌetiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Ka unu bụrụkwa ndị dị ọcha nꞌobi unu, ndị onye ọ bụla na-agaghị enwe ihe ọjọọ ha ga-ekwu megide unu, tutuu ruo ụbọchị ahụ Kraịst ga-alọghachi.
 Ụfọdụ mmadụ nwere ike ịjụ ịnabata okwu ndị a, ma ha bụ ezi ozizi nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, bụrụkwa ntọ ala nke ezi ndụ. Onye ọ bụla naekwu ihe ọzọ dị iche bụ onye na-eweli onwe ya elu na onye nzuzu. Ọ bụkwa onye hụrụ ịrụ ụka na ịjụ oke ajụjụ nꞌanya, nke na-eweta ekworo, esemokwu, nkọcha na ajọ echiche. Ndị a hụrụ irụ ụka nꞌanya, ndị mmehie kpuchiri obi, amaghị otu e si ekwu eziokwu. Nꞌebe ndị dị otu a nọ, ozi ọma a bụ ụzọ dị mfe ha si akpata ego. Si nꞌebe ha nọ wezuga onwe gị.
 Nꞌihi na ndị dị otu a abụghị ndị ozi nꞌezie. Ha bụ ndị ụgha, ndị ghọgburu unu ime ka unu chee na ha bụ ndị ozi Kraịst. Ma omume ha adịghị eju m anya, nꞌihi na ekwensu nꞌonwe ya nwere ike ịgbanwe onwe ya dịrị ka mmụọ ozi na-enye ìhè. Ya mere, ọ bụghị ihe iju anya ma ọ bụrụ na ndị na-ejere ekwensu ozi emee onwe ha dị ka ndị na-eje ozi ụzọ ezi omume. Ma nꞌọgwụgwụ oge, ha ga-anata ịta ahụhụ dị ukwuu nꞌihi ajọ ọrụ ha rụrụ.